Bilisummaa Oromoo: Akka maallaqni isin godhe taatanii harkuma keessaniin ibidda qabataa jirtu. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBilisummaa Oromoo: Akka maallaqni isin godhe taatanii harkuma keessaniin ibidda qabataa jirtu.
Bilisummaa Oromoo: Jammaarii kaadiree dhageessuu?
Akka maallaqni isin godhe taatanii harkuma keessaniin ibidda qabataa jirtu.
Yeroon kun yeroo WBOn oromiyaa keessaa basaastota sakatta’ee adaba barbaachisu adabu malee yeroo itti kaadireen jaanjoftuun akka teessanii tun WBO adamsituu miti.
Carraan isin qabdan ummata oromoo dhiifama gaafattanii WBO’tti harka kennachuu qofa.
Kuni naaf hin tahu jennaanis guyyaan isiniif dhufaa jira
Via: Nama Barri Miite
They are Human beings like me & u
Justice for Harargee Oromia
(SBO/VOL – Adoolessa 03, 2018)
Odeeffannoo fi Dinniina Hatattamaa !
OPDO fi bulchiinsi Lammaa Magarsaa sochii fi caasaa Adda Bilisummaa Oromoo irratti duula addaan hin citne geggeessaa akka turanii fi jiran irra deddeebi’amee ibsamaa turuun ni yaadatama.
Yeroo ammaa kana duuluma kana sadarkaa ol’aanaatti babal’isanii itti fufuuf ajajaa fi qajeelfama kallattiidhaan Lammaa Magarsaa irraa dabreen guutuu Oromiyaa keessatti duula geggeessuuf bobbaan eegalamuu isaa maddeen amanamoo irraa qulqulleeffachuun danda’amee jira.
Duula amma bifa haaraadhaan Oromiyaa guutuutti geggeessuuf bobba’aa jiran kanaaf ololli isaan qopheeffatan “TPLF/Wayyaaneetu kashilabboota maallaqaan bitee Oromiyaa keessatti akka Alaabaa ABO qabatanii sossohan gochaa jira waan taheef namootni kun rukutamuu qabu” kan jedhu tahuunis beekamee jira.
Kuni tarkaanfii farrummaa ol’aanaa tahe jedhamee bulchiinsa Lammaa Magarsaatiin qabsoo bilisummaa Ororomoo irratti karoorfamee dha. Akeekni isaas ummatni keenya Alaabaa mallattoo Bilisummaa isaa taate kan ilmaan isaa kumaa-kitilaan irratti wareegamaa turanii fi jiran (Alaabaa ABO) qabatee mul’achuu akka sodaatuu fi faallaa sanaa ammoo Alaabaa gabroomfataa kan isaan humnaan irratti fe’uu barbaadan qabachuuf akka dirqamu taasisuu dha. Hundaa olitti ammoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo galii isaa hanqisuuf ykn. galii isaa irraa jal’isuuf haala mijeeffachuuf jecha caasaa ABO fi Waraana Bilisummaa Oromoo, akkasumas, Qeerroo Bilisummaa Oromoo kanaan dahatanii rukutuuf akka tahe dhalli Oromoo hundi beekuu qaba.
Irree fi Gaachana Ummata keenyaa kan tahe Waraanni Bilisummaa Oromoo, Qeerroon Bilisummaa Oromoo, miseensotaa fi deggertootni ABO waliigalatti, akkasumas, ummatni bal’aan Oromoo duula farreen Qabsoo Bilisummaa Oromoo kana dursanii bakkayyutti wal hubachiisuudhaan akeeka isaanii harkatti doomsuun dirqama lammummaa fi gaaffii yeroo tahuu hubatanii murannoodhaan dura dhaabbachuu qaban.
Hoogganootni OPDO fi kan Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatis (Bulchiinsi Lammaa Magarsaa) duula farrummaa Qabsoo Bilisummaa ummata keenyaa irratti geggeessan kana irraa hatattamaan dhaabbachuu qaban !
Bulchinsi Mootummaa Naannoo Oromiyaa dirqamni isaa lola kallattii hundaan ummata Oromoo irratti banamee jiru irraa ittisuu tahee osoo jiruu sana dhiisanii Adda Bilisummaa Oromoo, Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi WBO irratti duula addaan hin citne gaggeessaa jiran irraa lubbuu dhabamaa jiru, qabeenya barbadaawaa jiruu fi balaa biroo haalli kun itti fufee hordofsiisu hundaaf kan itti gaafatamuuf jiru Bulchinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Hogganoota OPDO tahuu ABOn cimsee hubachiisa.
Yaa Oromoo:Ijoollen teenya ammallee adamsamaatii;hidhamaatii jirti